Ireo ny sasany amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny Photoshop amin'ny taona 2020 | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Gimp, Fitaovana famolavolana, Photoshop
Ny tontolon'ny programa fanovana sary dia niova ampy hahitana anay miaraka amin'ireo tena mpisolo toerana an'i Photoshop avy amin'ny Adobe. Ary bebe kokoa raha azo atao rehefa io ihany dia nanjary tamin'ny Artimental Intelligence hamonjy antsika asa sy ezaka.
Miaraka amin'izany fandrosoana lehibe ataon'ny programa Adobe izany, ho an'ireo zavatra fototra sy ireo izay somary sarotra kokoa, dia misy safidy hafa manan-danja izay tsy azontsika odian-tsy hita. Misy ny maimaim-poana ary misy ny vidiny kely kokoa, saingy lavitra io maodely famandrihana io izay nampiasan'ny Creative Cloud antsika ankehitriny. Ataovy.
Raha mitady isika tena mpisolo toerana ary izany dia novolavolaina mba hanampiana fiasa vaovao izay mahatonga azy io ho safidy tsara indrindra amin'ny Photoshop, ity dia Photo by Affinity. Fandaharana ho an'ny famolavolana sary sy ny famerenana sary ny sary izay maka tahaka ny Photoshop amin'ny singa maromaro ary tsy ananantsika maimaimpoana.
Eny, ho amin'ny alàlan'ny fandoavana tokana 54,99 euro hanana programa famerenana sary avo lenta eto an-tanantsika isika. Efa niresaka imbetsaka momba ny toetra tsara sy tombontsoa azo avy amin'ny Affinity Photo isika mba hanasongadinana ny sasany amin'ireo endri-javatra tsara indrindra toa ny fanitsiana RAW, HDR merge, stitching panorama, stacking focus, fikarakarana batch, fanovana rakitra PSD, fanitsiana sary tamin'ny 360, firaketana multilayer , zavatra maranitra ary fahaiza-manao samihafa amin'ny sary hosodoko nomerika.
Izany dia programa ho an'ny karazana mpampiasa samihafa, ary manana an'io fatra sarotra io ho an'ny mpampiasa matihanina ary koa ny fahatsorana azon'ny olon-tsotra tadiavina amin'ny fidirana amina endrika sary, sary hosodoko na famerenana sary. Midira andiany fampisehoana Affinity hafa toy ny Publisher o Designer; aza adino ny Fandaharam-pampianarana fandaharana mitambatra.
Azonao atao andramo ny fitsapana ny Affinity Photo hizaha toetra azy ary avy eo manapa-kevitra ny amin'ny fividianana farany ny fandoavam-bola tokana.
Sary Affinity - Web
Ny Adobe dia mavitrika tato ho ato miaraka amina andian-dahatsoratra lehibe ho an'ny fitaovana finday tsy hoe fotsiny noho ny fitomboan'ny fitomboany, fa koa satria amin'ny iPad dia misy programa iray izay afaka nanjary iray amin'ireo tsara indrindra hitaona sy famolavolana amin'ny alàlan'ny vokatra Apple, ity dia Procreate.
Procreate dia fampiharana miaraka amin'ireo fiasa mandroso izay nampidirin'ny Adobe Lightroom ao amin'ny kinova 6.0 ho an'ny telefaona finday, ary ho iray amin'ireo fampiharana be mpampiasa indrindra ho an'ny famolavolana nomerika ary koa ny hosodoko. Ary ny marina dia tao anatin'izay taona maro lasa izay dia tsy lasa fampiharana tsotra intsony izy io lasa sarotra kokoa hita ho toy ny tena safidy hafa ho an'ireo izay mitady zavatra toy ny 'Photoshop' amin'ny iPhone.
Ny olana lehibe indrindra dia izany tsy misy afa-tsy amin'ny finday Apple, Ka ny sisa amintsika dia tsy afaka manana safidy hanandramana azy. Na izany aza, safidy tsara ho an'ny programa famolavolana an'i Adobe izy io; indrindra ho an'ireo borosy izay maka tahaka ny fahatsapana mitovy amin'ny fitazonana pensilihazo eny an-tànana ary afaka mahatsapa ny fahatsapana mitovy amin'ny rehefa manindry ny ravin-taratasy amin'ny tendrony isika.
Azo alaina amin'ny € 9,99 amin'ny App Store, ka fantatrao hoe aiza no hitadiavana azy.
Miaraka amin'i Rebelle dia miatrika programa ho an'ny Windows sy OS X izahay dia miavaka amin'ny fakana tahaka ny teknika fanaovana sary sy sary hosodoko nentim-paharazana. Io lafiny io indrindra no ahitantsika bebe kokoa amin'ny fampiharana marobe toa ny Procreate teo aloha na ilay Adobe Fresco izay azontsika farany Windows hatramin'ny fahavaratra lasa teo.
Araka ny efa nolazainay, ny sandany lehibe indrindra dia ny fahaizana maka tahaka ny teknika nentin-drazana, ary raha fintinina bebe kokoa ny loko misy azy dia tsy manam-paharoa. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia saika ho azonao atao ny maka tahaka an'io fahatsapana fanaovana fanasana amin'ny borosy io izay manahaka ny teknika amin'ny loko rano. Izany hoe afaka mandatsaka rano indray mitete amin'ny lamba firakotra aza isika mba hahafahantsika mankafy ny fomba fivelany amin'ny lafiny rehetra toa ny tena nanaovantsika azy io tamin'ny tena izy.
Raha atao teny hafa, dia ho afaka ampanjifaina ny rano ao amin'io rano mitete io, ny halavany, ary ny haben'ny rano mitete. Tsy manana karazana preset bebe kokoa ho an'ny borosy izy, noho izany dia tsy lavorary tanteraka. Eny, azontsika atao ny manandrana andrana, ary tsy manana kinova ho an'ny finday izany, ka ho an'ny Windows sy OS X ny zava-drehetra amin'ny vidiny 89,99 $.
Iray daholo safidy hafa amin'ny Photoshop mikendry sary hosodoko nentim-paharazana ary miaraka amin'ireo pitsopitsony momba ny loko rano izay tsy azontsika avela ankilabao; Raha ny marina dia mahatonga antsika hieritreritra izay ho fitaovana ampiasaintsika amin'ireo programa ireo afaka taona vitsivitsy.
Eo am-pelatanantsika indray izao fitaovana iray hafa ho an'ny sary nentim-paharazana ary izany dia manahaka ireo teknika malaza indrindra toy ny arina, menaka na akrilika. Angamba ny sandany lehibe indrindra dia ny sarany ambany kokoa ary ny sasany amin'ireo antsipiriany ireo hanombohana amin'ity sary nomerika ity nefa tsy mandany vola be.
Mba hanasongadinana ilay interface izay rehefa manomboka manao sary isika dia manjavona tsy miova afa-tsy ny lamba vita amin'ny lamba ihany mba hahafahantsika mifantoka amin'ny famoronana sy ny talentantsika amin'ny fanaovana sary. Raha ny marina, rehefa mijanona tsy manao sary intsony isika dia ireo fitaovana be mpampiasa indrindra ihany no "miseho" amin'ny fomba mahagaga mba hahafahantsika mifantoka amin'ilay asa.
Amin'ity tranga ity eny manana kinova ho an'ny Windows sy OS X izahay amin'ny lafiny iray, raha ny iray kosa dia kinova manokana sy manokana ho an'ny finday toy ny iOS sy Android amin'ny vidiny izay tsy mihoatra ny 4 euro. Raha te hiditra amin'ny kinova amin'ny birao isika dia miova ny zavatra ka mahatratra $ 79.
Miaraka amin'izany fampiharana, ary inona ny tranonkala, adinonay ny programa misy amin'ny installer-ny, APK izany ho an'ny Android na .EXE ho an'ny Windows, handehanana mankamin'ny tranonkala iray ahafahantsika miditra amin'ny rindranasa natokana ho an'ny famerenana sary.
Ity no voalohany amin'ny lisitra ho solon'ny Photoshop amin'ny heviny malalaka famerenana ireo sary ireo izay tianay hatsaraina kokoa noho izy ireo. Ny antony mahatonga azy dia toy ny programa sarotra misy lahasa mandroso izany dia afaka ampidirina amin'ny Internet ka izay manana PC dia afaka mitantana azy tsara. Izany hoe afaka mamerina mametaka tsara ny sarinay izahay mba tsy hanipazana ny programa Adobe amin'ny fotoana rehetra.
Ny sasany amin'ireo hatsaran-toetran'i Photopea dia ahitana ny fanohanana sosona sy sarontava, fomba fampifangaroana ary fitaovana maromaro misafidy avy amin'ny lasso magnetika ho an'ny iray ho an'ny fifantenana Photoshop Magic Wand haingana. Izy io dia manana ny zavatra rehetra ilainao hanovana sy hanovana sary miaraka amin'ny fampiononana rehetra izay midika fa fampiharana tranonkala izay azontsika idirana avy amin'ny toerana rehetra.
tolotra famandrihana isam-bolana ho an'ireo izay te hanafina ny doka fa ho hitantsika ireo izay tsy mandoa izany.
Iray amin'ireo fampiharana ho an'ny famolavolana sary sy sary retouching misy akora lehibe kokoa ary efa niaraka taminay nandritra ny taona maro izany. Anisan'ny hatsarana lehibe ananany ny kinova samihafa ho an'ny Windows, Linux ary OS X. Raha miresaka momba ny programa open source maimaimpoana azontsika idirana tsy misy fandoavam-bola izahay ary misy manodidina ny vondron'ireo mpampiasa sy mpamorona manolotra fampianarana ary mandeha manavao azy mba tsy ho tavela amin'ny endri-javatra.
Tena manana isika Plugin GIMP antsoina hoe PhotoGIMP la manova miaraka amin'ny endriny mitovy amin'ilay programa Adobe. Manolotra fitaovana isan-karazany izay hitantsika ao amin'ny Photoshop ary maimaim-poana tanteraka izany ary nahatonga ny mpampiasa maro hanana azy io ho solon'ny Adobe's.
Manana isika fitaovana toy ny borosy vita amin'ny loko, fanitsiana loko, cloning, fifantenana ary fanatsarana ny sary. Ny ekipa miadidy ny fampandrosoana azy dia afaka nanolotra safidy hafa ho an'ireo izay manana teti-bola voafetra.
Uno amin'ireo programa tsara indrindra ananantsika eto amin'ny Internet ary izany rehefa nandeha ny fotoana dia nihatsara ihany koa mba ho safidy hafa amin'ny Photoshop horaisina. Indrindra rehefa tsy manana toerana ampy ao amin'ny memo PC izahay ary te hikaroka rindranasa iray amin'ny Internet ahafahanay mamerina sary sy manao hetsika mahazatra mahazatra an'ireo programa ireo.
Anisan'ireo mampiavaka azy tsara indrindra ny mahita ny karazany maro karazana hatramin'ny 600. Ary ny marina dia mitovy amin'ny Photoshop ilay interface, noho izany dia ho hitanao ao an-trano rehefa mampiasa azy io amin'ny Firefox na Chrome ianao.
Ary tsy mety diso misy ny programa Corel ho solon'ny etsy ambony. PHOTO-Paint avy amin'i Corel dia tonian-dahatsoratra voatokana izay avy amin'ny fandaharana CorelDRAW. Nohavaozina mazava tsara tamin'ity taona 2020 ity niaraka tamin'ny rindrambaiko noforonina tsara sy ireo fiasa iaraha-miasa izay zatra antsika ankehitriny amin'ny fampiharana maro.
Manana ny fitaovana matihanina izy io miasa miaraka amin'ny vector, sosona, fanovana sary ary ireo fitaovana amin'ny typography tsy azontsika atao ny miala amin'ny resaka programa manana kalitao. Amin'ny maha antsipiriany azy dia manome fanohanana ho an'ny 4K sy efijery marobe izy, koa raha mandeha miaraka amin'ny PC misy Windows 10 ianao dia vintana.
Iray hafa natokana ho an'i Apple ary amin'ity indray mitoraka ity mankany amin'ny famolavolana UI sy UX ho an'ny tranonkala izahay. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mitady rindranasa ianao hamolavolana ireo singa rehetra azon'ny interface tsara, na ho an'ny tranokala na fampiharana ho an'ny finday, ny Sketch dia iray amin'ireo tsara indrindra.
Fampiharana natokana ho an'ny vector ary izany ao anatin'ny taona maromaro, ary misaotra fa natokana ho an'ny Mac, nahazo ny tehaka avy amin'ny mpamorona erak'izao tontolo izao. Io dia ahafahanao mamorona sary avy amin'ny endrika iray na maka ny fitaovan'ny pensilihazo hamoronana vorona ary hamaritana ireo singa izay hampiasainay amin'ny tranokala na amin'ny famolavolana.
Toy ny Photoshop manana fitaovana fototra hafa koa, ka raha miaraka amin'ny Mac ianao dia manomàna $ 99 hahazoana izany. Iray amin'ireo zava-dehibe ilaina amin'ny tontolon'ny famolavolana UI sy UX.
Vitanay ity lisitry ny safidy hafa amin'ny Photoshop ity amin'ny Paint.net. Iray amin'ireo programa tsotra indrindra ananantsika ao amin'ny Windows ary ny fiankinan'ny fianarany dia mamela ny mpamorona vaovao hiditra amin'ny famoronana nomerika. Paint dia programa natombok'i Microsoft miaraka amin'ireo kinova Windows, ka manana ny fototra rehetra hanatanterahana fanovana ifotony ary koa famerenana sary hafa.
Fampiharana tsotra an'ny lanjany ambany amin'ny resaka fampisehoana sy fitahirizana ho an'ireo izay tsy te hampiasa rindran-tranonkala ary te hanana programa kalitao amin'ny Windows PC.
Tapitra izany ity lisitry ny safidy Photoshop ity Azo antoka fa ho vitantsika ny tsy misy Adobe, na hampiseho aza fa mbola mpanjakavavin'ny famoronana nomerika amin'ny sakany rehetra izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ny safidy tsara indrindra amin'ny Photoshop